Ezigbo Ọnụ --zọ - ysmụaka --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ezigbo ọnụ ụzọ nkezi 4.1 / 5 si 81
49th, o nwere 239.8K echiche
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Comedy, fantasy, mma, Ebube, Yaoi
Mgbe onye uwe ojii na-achụ ndị omekome, onye mmụọ ọjọọ nwere mmụọ ọjọọ na-atụghị anya ya. N'ịbụ onye lanarịrị ihe ahụ merenụ, Do Gyeong Joon hapụrụ ka ọ na-elegharị anya mgbe ụdị ọdịdị nke ihe okike dị omimi na-agbagha. Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya mgbe nke a gasịrị, ha abụọ ahụ ọzọ mgbe mmụọ ọjọọ ahụ dakwasịrị ụlọ Do Gyeong Joon, na-asị: “Ngwa ngwa! Achọrọ m ịbanye n'ime gị ”… !?
Nsogbu anyị - Webtoon Manhwa Hentai